Microsoft inokunda mega-contract yePentagon gore zviwanikwa (JEDI) | Linux Vakapindwa muropa
Finalmente Pentagon yakadana Microsoft semunhu anokunda Chishanu chapfuura yemakwikwi eruzhinji gore zviwanikwa zveUS department reDziviriro. kukunda Amazon Web Services. Iyo 10-gore rakabatana rekudzivirira kwezvivakwa chibvumirano, inozivikanwa seJEDI, yakonzera kupesana pakati peAmazon, Microsoft, IBM, Oracle, neGoogle kuhwina mubairo uye kubatsira Pentagon kugadzira mwero wegore nharaunda mukati meDhipatimendi reDziviriro. ichafukidza matavi ese eUS Army.
Kuvandudza yako IT masisitimu, Pentagon inoronga kutamisa makumi masere kubva muzana kuenda kune gore sechikamu cheiyo Joint Bhizinesi Rezvekudzivirirwa Kwezvivakwa chirongwa, icho chinozofukidza data rakapatsanurwa uye risina kusarudzika.
"Isu rezvekudzivirirwa kwenyika rinoti tinonatsiridza kumhanya nekugona kwatinoita nekuvandudza nekugona kwehunyanzvi kuvarume nevakadzi vedu vakapfeka yunifomu."
Mazhinji emauto anoshandisa masystem emakomputa kubva kuma80 nema90 uye dhipatimendi redziviriro rakashandisa mabhiriyoni emadhora kuyedza kuvandudza iwo, kuwedzera vakuru vakanyunyuta nezvechinyakare masystem emakomputa uye kutadza kuwana marekodhi kana kugovana ruzivo nekukurumidza sezvazvinoitwa mumasangano akazvimirira.
"Mubairo uyu idanho rakakosha mukuitwa kwechirongwa chedu chemazuva ano chedigital." Kusimbiswa kwemubairo wechibvumirano ichi chakapihwa Microsoft kwenguva yemakore gumi, kusvika Gumiguru 10, 24.
Durante maitiro award yechibvumirano ichi, , que akareba mwedzi yakawanda pamwe dzakasiyana monyorora uye majana, Dhipatimendi reDziviriro rakaongorora AWS muna Ndira, anofungidzirwa kuti akambotora mushandi wekare wePentagon uyo aimbove ari wekambani yake kuti amubatsire kunyora chikumbiro chake chemhinduro kudanidziro yemabhidi.
MunaEpril, Dhipatimendi reDziviriro rakagumisa kuti pakanga pasina kukakavara kwekufarira, asi zvakadaro vakaona matambudziko etsika akaitisa kuti itumire kuferefeta kuInspection General.
Iri zhizha, Yakanga iri nguva yeMutungamiriri weUnited States, Donald Trump, kuratidza kuti aigona kuyera nyaya iyi, achiziva kuti Jeff Bezos, muvambi weAmazon, haana kumbopunyuka kumushora kwake.
Vamwe vanopa gore, senge IBM naOracle, vakadzingwa muna Kubvumbi kubva mumakwikwi, vakashoropodza danho reUnited States Defense yekusarudza imwechete gore rinopa. pangataura ndiani akamhan'ara nyaya iyi akadzingwa asi achiri kukwanisa kukwidza nyaya iyi.
Kubva kuvhurwa kwetender, zvirongwa zvechibvumirano cheJEDI zvakange zvatove nemakakatanwa nevamwe vanopa. Kune chikamu chayo, Oracle Corporation ndafunga kuisa chichemo pamberi pehurumende yeUS. Kupokana nepfungwa yekupa chibvumirano muPentagon gore kune mumwe mupi. YeOracle, izvi zvinogona kukuvadza hunyanzvi, makwikwi uye chengetedzo.
Mhosva yeOracle Akataura zvakare kuti kutonga kwacho kwakakanganiswa nemakakatanwa mazhinji zvido, kusanganisira hukama pakati pevaimbove Dhipatimendi reDziviriro nemaAmazon
Kana zvakadaro Google, zvakare inogona kufarira chibvumirano ichi, iye amene akabva mumakwikwi mukutanga kwaGumiguru 2018, vachipokana kuti chirongwa ichi chinogona kupokana nehunhu hwavo. Mune chirevo, Google yakati:
"Tichiri kushanda kubatsira hurumende yeUS negore redu munzvimbo zhinji, hatisi kubhidha chibvumirano cheJEDI nekuti hatina chokwadi kuti izvi zvinoenderana nemirau yedu maererano nekontrakiti yeJEDI pakutanga. Tichishandisa AI, isu ipapo akafunga kuti paive nezvikamu zvechibvumirano izvo zvaive kunze kwenzvimbo yezvivimbiso zvehurumende zviripo.
Mukudhinda kwako, veDhipatimendi reDziviriro vakaona kuti maitiro acho kutora yakaitwa maererano nemitemo inoshanda nemirau: «Vese vakabhidha vakabatwa zvakaenzana uye vakaongororwa zvichienderana nematanho ekuongorora akagadzwa mu" kukokwa kwethenda ", akadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inohwina mega-contract yePentagon gore zviwanikwa (JEDI)